YINTONI EMELE UKWAZI XA UFAKA IZIXHOBO ZOBUTHO-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
YINTONI EMELE UKWAZI XA KUFAKWA IZIXHOBO ZOBUTHO
Ixesha: 2020-07-09 I ngxelo: 63
Ngakumbi nangakumbi abantu baqala ukuthanda ukusela ibhiya yobugcisa. Abaphathi bakwangabajolise kwimarike yobugcisa bobugcisa kunye nokuthenga izixhobo zobhiya. Wazi ntoni malunga nofakelo ngononophelo lwezixhobo zebhiya yobugcisa?
Okokuqala, iya kufakelwa ngabafakeli beebhiya zobugcisa!
Umnini othenge izixhobo zobhiya, sukufaka kwaye ulungise izixhobo zebhiya, u-Ning Bo Coff Machinery CO., LTD unofakelo lwezixhobo ezinobuchule kunye neqela lokulungisa ingxaki ukukunceda ufake.
Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo indawo yofakelo yoomatshini beebhiya, njengamanzi kunye nococeko Ukuba umatshini wakho wobhiya wobugcisa akafakwanga kumgangatho wokuqala kodwa kumgangatho wesibini okanye kwenye indawo, jonga amandla athwala umthwalo indlu kunye nokubekwa kwemijelo yamanzi kunye namanzi.
Okokugqibela, ukufakela izixhobo zobhiya kuyinyani kufuneka uzithathele ingqalelo ukusebenzisa: nangona umatshini wobhiya usebenzisa yonke imihla inani lezinto ezininzi, kodwa ukuba asihoyi izixhobo zokukhupha indawo, unokuzibonakalisa ngokwakhe xa usebenzisa izixhobo azikho lula, awubeki ngokwenyani izixhobo ukuze wonge indawo yezixhobo zebhiya.
Previous: Ibhokisi ithatha inxaxheba kwiMiboniso ekwi-Intanethi
Okulandelayo: I-Ale ebomvu (irhasi)